Ukubekezela Kuletha Impumuzo | INcwadi Yonyaka Ka-2015
URafael Pared okhonza eBethel nomkakhe, uFrancia, waba ummemezeli ngo-1957 eneminyaka engu-18. Ukhumbula indlela amaphoyisa omshoshaphansi ayemlandela ngayo lapho eyoshumayela, efuna ithuba lokumbopha yena nayeshumayela nabo. Uthi: “Ngezinye izikhathi kwakudingeka sibaleke siphume ngemigwaqo emincane, seqe izingcingo ukuze singabanjwa.” U-Andrea Almánzar uchaza lokho yena nabanye ababekwenza ukuze bangaboshwa: “Kwakudingeka sihlakaniphe. Sasiye sishumayele endlini eyodwa, seqe eziyishumi, bese singena kwelandelayo.”
Ngo-1959, uTrujillo wayesebuse iminyaka ecishe ibe ngu-30, kodwa isimo sezombusazwe sase sishintsha. Ngo-June 14, 1959, abantu baseDominican Republic ababedingisiwe bafika bengasadle zinkobe zamuntu kuleli zwe bezokwenza omunye umzamo wokuketula uTrujillo. Nakuba lokhu kuhlasela kwabo kungaphumelelanga futhi abakhi balolu zungu babulawa noma baboshwa, izitha zikaTrujillo ezazilokhu zanda zazinomuzwa wokuthi zingawuguqisa uhulumeni wakhe, ngakho zalwa nawo kakhulu.
Ngo-January 25, 1960, ngemva kweminyaka iSonto LamaKatolika licheme nohulumeni kaTrujillo, labhala incwadi likhalaza ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Isazimlando saseDominican Republic uBernardo Vega siyachaza: “Ukuhlasela kwango-June 1959 nokucindezelwa kwalabo ababehlasele, kamuva nokucindezelwa kwenhlangano yomshoshaphansi elwa nohulumeni, kwaphoqa iSonto ukuba, ngokokuqala ngqa, lingambheki kahle uTrujillo.”
Kuyathakazelisa ukuthi ngo-May 1960 uhulumeni wakuqeda ukuvinjelwa koFakazi BakaJehova. Ngemva kweminyaka becindezelwe, impumuzo yaqhamuka kumuntu ongalindelekile—uTrujillo uqobo lwakhe—ngemva kokuba eselahlwe iSonto LamaKatolika.